राति सुत्नुअघि एक गिलास मनतातो दूध | Ratopati
राति सुत्नुअघि एक गिलास मनतातो दूध
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १२, २०७६ chat_bubble_outline0
एजेन्सी : बिहान होस् वा बेलुका जुनसुकै समयमा पनि दूध पिउन सकिन्छ । तर राति सुत्नुभन्दा अगाडि दूध पिउनु स्वास्थ्यको लागि रामबाण हो । रातिको सयममा दूध पिउँदा दूधमा पाइने सबै तत्वहरु शरीरले सजिल्यै ग्रहण गर्न सक्छ । डाक्टरहरु पनि राति दूध पिउनु उत्तम रहेको बताउँछन् ।
रातिमा दूध पिउँदा के के फाइदा छन् ?
मिठो निन्द्राको लागि
राति सुत्नुअघि दूध पिउँदा मिठो निन्द्रा आउँछ । जसलाई राति निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ति व्यक्तिहरुले राति सुत्नुअघि एक गिलास दूध पिउनुपर्छ । दूधले मानसिक तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ । दूध पिउँदा दिमाग शान्त रहन्छ । दूधमा पाइने ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिडले राम्रो निन्द्राको लागि मद्दत गर्छ । यसका साथै यसले दिमागलाई बलियो पनि बनाउँछ । मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउन राति सुत्नुअघि एक गिलास दूध पिउनुपर्छ ।
पाचन शक्ति बढाउँछ
दूधले शरीरमा पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ । राति खानामा जे खाए पनि सुत्नुअघि मनतातो दूध पिएर सुत्दा त्यसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ । साथै, दूधले खानामा भएको मसलाको असर पनि कम गराउँछ । दूधले शरीरमा शक्ति दिन्छ भने प्रजनन् प्रक्रियालाई पनि वृद्धि गर्छ ।
दूधमा गुड मिसाएर दूध पिउँदा पेटका थुप्रै समस्याहरु समाधान हुन्छ । दूध र गुड सँगै सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले छालालाई पनि चम्किलो बनाउँछ । रातमा दूध पिउँदा रक्तचाप सन्तुलित राख्ने काम गर्छ । साथै, दूधमा पाइने सेसिन र व्हे प्रोटिनले मासंपेशी मजबुज बनाउँछ ।
कोरानाबाट बच्ने केही घरेलु तरिका
कोरोना भाइरसः यस्तो मुश्किल समयमा कसरी खुसी रहने ?
अफिसमा काम वा घरमै बसेर गरिने काम : कुन बढी प्रभावकारी ?
कोरोना भाइरसले तपाईंको यौन जीवनमा कस्तो असर पार्ला ?
बन्दलाई कसरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नसकिन्छ ?
रानीपोखरीका मजदुर बिचल्लीमा : राहतमा चामलभन्दा नुन धेरै दिए, खाने कुरा छैन (भिडियोसहित)
अछामको अस्पताललाई सहयोग
के रियल फर्केलान् रोनाल्डो ?
सावधान ! भोटराम र लोकराम कोभिड–१९ का मित्र हुनसक्छन्